China Heavy Duty Thickened Non-Woven Aeration Fabric Pots Plant Grow Bags fekitori uye vagadziri |Zhengwei
Plant Kura Mabhegi
Eco-inoshamwaridzika, Yemhando yepamusoro, Kupeta
Gadheni Kurisa Hari
Felt grow bag chigaba chinofema chejira remachira, chakafukidzwa nemakomba emhepo anobvumira midzi kufema uye kukura zvine hutano, mweya wakawanda kusvika pamudzi wechirimwa, kuvandudza dhiraivha uye kuchengetedza midzi kubva pakupisa kana kudiridza. Uye jira rinonzwa rine imwe mvura. kunyura, kuchengetedza ivhu mwando, inochengetedza chiyero pakati pemhepo, ivhu nemvura. Inochengeta zvirimwa zvichidziya muchando uye kutonhorera muzhizha.
1) Felt Kura mabhegi anowanzo shandiswa kurima miriwo, maruva, miti, nezvimwe.
2) Kura mabhegi akakodzera greenhouse, purazi, gadheni, nezvimwewo, Zviri nyore kutarisira.
3) Iwe unogona kudyara miti muhukuru hukuru kukura mabhegi zvakananga, hapana chikonzero chekudyara pasi pevhu, nyore kuisa, inogona kuwedzera kuchengetedzwa kwemidzi yemiti.
* Yakasarudzika Dhizaini: Yese bhegi rembatatisi rine hwindo rekuona.
* Zviri Nyore Kufambisa: Iine mubato wakasimba unobvumidza iwe kuti uifambise zviri nyore.mabhegi embatatisi akanakira patio, magadheni madiki, mabhakoni, dzimba dzezuva uye chero nzvimbo yemukati / yekunze.Inogona kushandiswa kune mbatata, hanyanisi, taro, radish, karoti nemimwe miriwo.
* Durable zvinhu uye Reusable: Yakagadzirwa nejira rinofema, iro rine hushamwari kwezvakatipoteredza.Yakareruka uye yakaoma, inogona kushandiswazve kwemakore.Inogona kupetwa uye kuchengetwa panguva isina basa.Inoshandiswawo sebhegi rekuchengetedza, sekuisa zvipfeko zvakasviba, kurongedza zvishandiso ect.
* Hutano: jira rinofema, rinochinjika.
Isu tiri fekitori yakananga, masaizi akagadziridzwa aripo.
Tine vatengi vakawanda veAmazon vatengesi, FBA label, barcodes, mirairo, uye yambiro zvese zvinogona kuwanikwa.
Zvakapfuura: Inotakurika Heat Press Wool Kudzvanya Mat Yakakwana Ironing Station yeQuilting
Zvinotevera: Mabhegi emhando yepamusoro ane mubato wemafashoni ekutumira mabhegi mahombe ekuchengetera mabhegi
Kunzwa Mucheka Kudyara Kura Mabhegi
Mbatatisi Dzakanzwa Dzinokura Mabhegi
Kukura Bag Remuriwo
Mabhegi Asina Kurukwa Anokura
Vegetable Kura Mabhegi
Fashion promotional Yakadzokororwa yakanzwa bhegi tsika lo...
Custom Packing Bag Gift Packing Yakanzwa Kuchengeta Ba...
High quality yakanzwa bag mune wholesale
1/2/3/5/7/10 Gallon Fabric Pots yeGarden Plan...
Fashional Felt Holder / File Case / Gwaro Ba...